Jannadii Way Luntay | Farriinta Kitaabka
Jannadii Way Luntay
Malaaʼig caasi ah baa duufsatay ninkii iyo naagtii ugu horreeyay siday Ilaahay xukunkiisa uga soo horjeedsadaan. Sidaa daraaddeed bay dembi iyo dhimasho dunidii u soo gashay
WAA hore intuunan Ilaahay binuʼaadanka abuurin wuxuu abuuray ruuxyo la arki karin oo ah malaaʼigaha. Malaaʼig caasi ah oo hadda loo yaqaanno Shayddaanka Ibliiska ah baa isku taxallujiyay inuu Xaawa siro. Wuxuu ku damac geliyay inay cunto miraha geedka keliya uu Ilaahay mamnuucay.
Shayddaankii wuxuu ka hadalsiiyay abeeso ama mas siduu ugu ekaysiiyo inuu Ilaahay wax fiican ka ceshanayo naagta iyo ninkeeda. Malaggan wuxuu Xaawa ugu sheekeeyay in iyada iyo ninkeedaba dhiman doonin haddii ay wax ka cunaan miraha uu Ilaahay mamnuucay. Saas awgeed Shayddaanku wuxuu Ilaahay ku eedayay inuu been u sheegay carruurtiisa dunida joogta. Khaayinkan wuxuu u ekaysiiyay ka soo horjeedsadka Ilaahay inay tahay waddo fiican oo aqoon iyo xorriyad keenta. Haddaba been buu sheegay. Weliba waxay ahayd beentii ugu horreysay oo dunida weligeed laga sheegay. Arrinta meesha taal waxay khuseysay sayidnimada Ilaahay. Ilaahay xaq muu u leeyahay xukunka? Xukunkiisana ma mid xaq ah baa oo u wanaagsan kuwa uu maammulo?
Xaawa beentii Shayddaanka bay aammintay. Waxay keentay inay damacdo miraha geedka kaddibna wax bay ka cuntay. Kabacdii ninkeeday wax ka siisay isna wuu la cunay. Sidaa awgeed dembilayaal bay noqdeen. Si walba uu ficilkooda mid yar u ekaa wuxuu ahaa ka hor imaansho Ilaahay. Haa Aadan iyo Xaawa si kas ah bay u jebiyeen amarkii Ilaahay. Waxay diideen xukunka kii iyaga abuuray oo wax walba siiyay xitaa noloshooda kaamilka ah.
Farcanka “madaxaaguu burburin doonaa, adiguna cedhibtiisaad burburin doontaa.”—Bilowgii 3:15
Ilaahay wuu xukumay caasiyadaas. Wuxuu ballanqaaday inuu Farcan iman doono. Badbaadiyahan wuxuu halaagi doonaa abeesadii oo ah Shayddaanka. Ilaahay siduu carruurtooda aan weli dhalan ugu naxariisto buu Aadan iyo Xaawa dhimashadoodi dib u dhigay. Kan uu Ilaahay soo diri doono baa masaxi doono dhibaataday caasinimadii Aadan iyo Xaawa keentay markay beertii Ceeden joogeen. Sidaas darteed carruurtooda mustaqbalka rajay heli karaan. Haddaba ayuu ahaan doonaa Kan la soo diriyo? Sidee bayna ujeeddada Ilaahay oo ku saabsan Badbaadiyahan u dhici doontaa? Jawaabaha suʼaalahan tartiib tartiib baa loogu daahfuray qoraalka Kitaabka.
Ilaahay Aadan iyo Xaawa Jannadii wuu ka eryay. Si adag bay u hawshoodeen siday dhulka beerta Ceeden ka baxsan wax ay cunaan uga beertaan. Waqti kaddib Xaawa way uuraysatay oo waxay dhashay cunuggoodii ugu horreeyay Qaabiil. Aadan iyo Xaawa waxay dhaleen wiilal iyo gabdho kale oo ay ka mid ahaayeen Haabiil iyo Seed oo ahaa Nuux awowgiis.
—Casharkan wuxuu ku saabsan yahay Bilowgii qaybaha 3 ilaa 5; Muujintii 12:9.
Beentii ugu horreysay maxay ahayd yaana sheegay?
Aadan iyo Xaawa sidee bay Jannadii u lumiyeen?
Markuu Ilaahay caasiyadan xukumay rajadee buu bixiyay?
KAAMILDARRO IYO DHIMASHO
Markuu Ilaahay abuuray Aadan iyo Xaawa cillad may lahayn weligood bayna adduun Janno ah ku noolaan lahaayeen. Ilaahay markay ka soo horjeedsadeen way dembaabeen. Kaamilnimadoodii way xooreen oo xiriirkay la lahaayeen Yehowah oo ah Isha nolosha way gooyeen. Markaa kaddib iyaga iyo farcankooda cilladaysan dembi iyo dhimasho ka may baxsan karin.—Rooma 5:12.
Wadaag Wadaag Jannadii Way Luntay